‘स्मार्ट लाइसेन्स’ कहिले छापिन्छ ? | NepalDut
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ कहिले छापिन्छ ?
उनका अनुसार अहिले विभागका सात जना कर्मचारीले उपकरण सञ्चालनको तालीमसमेत लिइरहेका छन् । उनीहरूले तालीम सकेसँगै उपकरण पूर्णरूपमा चलाउन लागिएको हो । उनले भने, ‘एक साताभित्रमा तालीम सकाएर मास प्रिन्टर पूर्णरूपमा छपाइमा जानेछ ।’
मास प्रिन्टरले दैनिक साढे ७ हजारसम्म चालक अनुमतिपत्र छाप्ने बताइएको छ । ‘मास प्रिन्टर’ सँगै विभागमा रहेका पुरानो छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) पनि प्रयोगमा आउने उनको भनाइ छ । पुरानो उपकरण कुनैमा समस्या आए पनि विभागले मर्मत गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अहिले पनि एक कार्य समयमा छाप्दा दैनिक २ हजार ५ सय कार्ड छापिरहेको छ । ३ कार्य समयमा चलाउन पनि विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति रहेको उनले बताए ।